घुम्ने होइन त बागलुङको भकुण्डे? – Hotpati Media
घुम्ने होइन त बागलुङको भकुण्डे?
९ पुष २०७६, बुधबार १३:३३ मा प्रकाशित (10 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
बागलुङ-आउँदो सातादेखि भ्रमण वर्ष शुरु हुँदैछ। बागलुङ घुम्न चाहनेलाई उपयुक्त गन्तव्यस्थल हो, भकुण्डे। तपाईं पनि योजना बनाइहाल्नुस्। भकुण्डे नपुगे बागलुङ घुमघाम अपुरो हुन सक्छ। भकुण्डे पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत गाउँ हो। यसको चिनारीमा घरवाससमेत थपिएको छ। बागलुङ नगरपालिका-१० स्थित सो गाउँ अहिले पर्यटकको रोजाइमा छ। गएको कात्तिकमा विश्व भेगन समूहमा आबद्ध युरोप र अमेरिकाका पर्यटकले भकुण्डेलाई रोजे, घरवासमा रात बिताए। त्यसयता चिनियाँ पर्यटकले हेलिकप्टर नै लिएर त्यहाँ पुगे।
कोरियाका विद्यार्थी/पर्यटकसमेत बेलाबेला भकुण्डे पुग्छन्। आन्तरिक पर्यटक त जाने नै भए। खुलेको मौसममा त्यहाँ पुग्ने जो कोहीको मन फुरुङ्ग हुन्छ। दन्तेलहरझैँ देखिने हिमालले यात्राको थकान र तनाव बिर्साउँछ। ग्रामीण सौन्दर्य, संस्कृति र रहनसहनले उसैगरी लोभ्याउँछ। बागलुङ सदरमुकामदेखि १० किमि कच्ची सडकको यात्रामा भकुण्डे पुगिन्छ। पैदल हिँडे जम्मा दुई घण्टा। शहरको कोलाहल र प्रदूषण पन्छाएर छिन भरमै प्रकृतिको काखमा पुग्न सकिन्छ। भकुण्डेको पर्यटन हिमालसँग जोडिएको छ। जहाँबाट २२ भन्दा बढी चुचुरा देख्न पाइन्छ। सूर्योदय र सूर्यास्तको छेकोमा त झन हिमाली दृश्य मनमोहक लाग्छ।भकुण्डेको मुख्य आकर्षण नै हिमशृङ्खलाको अवलोकन हो। गाउँको सिरान मुलाबारीमा बनेको ‘भ्यूटावर’ले हिमाल झन नजिक आएको आभास मिल्छ। गुर्जा, धौलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुछ्रे लयतका हिमाल आँखैअघि ठोक्किन्छन्। हिमाल हेर्न उपयुक्त याम शरद ऋतु हो। दोस्रो शिशिर-वसन्त याम हो।
सूर्योदय अवलोकनका लागि बढी पर्यटक ‘भ्यूटावर’ पुग्छन्l दुई हजार ३०० मिटर उचाइमा अवस्थित ‘भ्यूटावर’ पुग्न गाउँदेखि पैदल २० मिनेट लाग्छ। हिमाल हेर्न मात्र नभई अन्य गन्तव्य पुग्न पनि हिमाल भकुण्डेलाई रोज्छन्। भकुण्डे हुँदै छिमेकका पर्यटकीयस्थल भैरवस्थान मन्दिर र गाजाको दह पुग्न सकिन्छ। सरकारले भकुण्डे-भैरवस्थान-गाजाको दह समेटेर पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रुपमा सूचीकृत गरेको छ। भैरवस्थान बानपा-१२ र गाजाको दह जैमिनी नगरपालिका-३ मा पर्छ। धेरै हिमाल देख्न सकिने भएकै कारण भकुण्डेलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन गाउँले कस्सिए। पछि घरवास (होमस्टे) चल्यो, नयाँ गन्तव्य भेटिए, प्रचारप्रसार भयो, विस्तारै भकुण्डेको परिचय पर्यटकीय गाउँका रुपमा फेरियो।
“पर्यटक आउने क्रम बढ्दो छ, भ्रमण वर्षमा अझ थपिने अपेक्षा छ”, घरवास सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले भने। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी हाल नौ घरमा मात्र रहेको घरवास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने योजना छ। दैनिक सय जना पर्यटक राख्ने क्षमता भकुण्डेको ‘अतिथि सत्कार घरवास’ सँग छ। शुक्रबारदेखि शुरु हुने बागलुङ महोत्सवमा समेत उक्त घरवासको छुट्टै ‘स्टल’ राख्ने तयारी छ। घरवाससँगै ‘भ्यूटावर’, बराहताल, बराह, भैरव मन्दिर, सङ्ग्रहालय, कुथुकर्मको लेक आदि भकुण्डेका पर्यटकीय आकर्षण हुन्। दिनभर गन्तव्यस्थल घुमेपछि घरवासमा रात बिताउनु पर्यटकका लागि आनन्ददायक हुन्छ।
मुख्य याममा त भकुण्डेमा पर्यटकको चहलपहल नै देखिन्छ। “धेरैजसो नेपाली पाहुना नै हुन्छन्, पछिल्लो समय विदेशी पर्यटक पनि आउन थालेका छन्”, घरवास सञ्चालक इन्द्रा थापामगरले भने। पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि विसं २०६८ मा घरवास कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो। गाउँले जनजीवन, सत्कार, खानपान, घुमफिर र संस्कृतिको आनन्द बटुल्न पर्यटकले घरवास रोज्छन्। पर्यटकलाई पारिवारिक वातावरणमा बसोबास र स्थानीय परिकार उपलब्ध गराइने सञ्चालक थापामगरको भनाइ छ। खाना, खाजासहित एकरात बिताउँदा प्रतिव्यक्ति जम्मा रु ६०० तोकिएको छ। दुई रात काट्नेको भने रु एक हजार ५०० खर्च हुन्छ। खानाबाहेकका अन्य परिकार र पेय पदार्थमा भने छुट्टै मूल्य तिर्नुपर्छ।
पाहुनालाई स्थानीय खानाको स्वादसँगै मौलिक कला, संस्कृति झल्कने झाँकी, गीत र नृत्य पनि देखाउने गरिन्छ। पर्यटक बढ्न थालेपछि घरवासको क्षमता बढाउनेदेखि अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाइएको छ। ‘भ्यूटावर’ को सम्भारका साथै पदमार्ग निर्माणका लागि वडाको रु पाँच लाख बजेट छ। “भ्यूटावरमा सानो भवन बनाउने योजना छ, अवलोकन गर्ने ठाउँमा सिसा लगाउँदैछौँ”, वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर थापाले भने। गाउँको सिरानदेखि ‘भ्यूटावर’ जोड्ने पदमार्गको बाँकी काम यही वर्ष पूरा हुने उनको भनाइ छ । घरवासको क्षमता विकासका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुदान ल्याउन पहल भइरहेको छ।
बराहताल र रिठेखोलाबाट घरवाससम्म पदमार्ग निर्माणको कामलाई पनि अघि बढाइने वडाले जनाएको छ । बागलुङ नगरपालिका, जेसीज, उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायतले भकुण्डेको पर्यटन प्रबर्धनमा सघाएका छन्।